Uyisusa njani i-PIN yeSIM khadi kwifowuni yakho ye-Android | I-Androidsis
Ungayicima njani iPIN yeSIM khadi yakho kwi-Android
I-SIM khadi yefowuni yethu iza nePIN khowudi emiselweyo, esihlala siyinikwa ngumsebenzisi xa siqesha loo nombolo yefowuni. Kungenzeka ukuba le khowudi ayithandi umntu, ke sinayo ukubanakho ukuyitshintshaKwelinye icala, kuya kuba lula kakhulu kuthi ukuba sikhumbule.
Nangona ayisiyiyo kuphela kwendlela esinokukhetha ukuyifumana. Ngenxa yokusetyenziswa kweepateni ngoku, iikhowudi zokungena, ukuvulwa kobuso okanye inzwa yeminwe, i-PIN khowudi yeSIM khadi ayimfuneko kwi-Android. Ke kunokuba ngumdla kubasebenzisi abaninzi ukuqhubeka nokupheliswa kwayo.
Ukuba ufaka ipaswedi kwifowuni yakho ye-Android, xa uvula ifowuni, ikucela ukuba ufake iPIN kunye negama lokugqitha. Ke ngoko, ukushenxisa eyokuqala yinto enomdla, kuba sele sisixhobo eso kuthintela omnye umntu ukuba angene kwifowuni ngaphandle kwemvume yethu.
Kufuneka wenze ntoni ukuba ifowuni yakho ye-Android ayiyiboni iSIM
Eyona nto ilunge kakhulu, yinkqubo esinokuyenza ngokulula kwifowuni uqobo. Ngaphakathi kuseto kwi-Android esilufumanayo ngemisebenzi eyimfuneko ebonelela ngathi kunokwenzeka. Ke singayisusa loo khowudi nangaliphi na ixesha. Yeyiphi kubasebenzisi abaninzi abanokukhululeka.
1 Susa iPIN SIM kwi-Android
2 Ngaba kulungile ukususa iPIN SIM?
Susa iPIN SIM kwi-Android
Indawo ethile yamacandelo inokwahluka ngokuxhomekeke kwifowuni kunye nocingo lomntu onalo. Nangona kunjalo, sinokuhlala sikhangela olu khetho ngaphakathi kuseto lwe-Android. Amagama athambekele ekubeni ahluke phakathi kweempawu, nangona zihlala zininzi utshintsho kuloo ngqondo.
Kuya kufuneka sivule useto lwe-Android kuqala. Xa singaphakathi kubo, eyona nto iqhelekileyo kukuba kufuneka siye kwicandelo lokhuseleko lomnxeba. Kwezinye iifowuni kunokuba ngaphakathi kuseto oluphambili. Kule candelo sifumana enye ebizwa ngokuba yi-SIM khadi okanye into efanayo. Kukule candelo apho sine uthotho lweenketho malunga neSIM yefowuni, kubandakanya ukubanakho ukucima i-PIN khowudi. Ke ngoko, singena kweli candelo.
Ungasusa njani isitshixo seSIM khadi kwi-Android
Ngaphakathi kweli candelo zihlala zingeninzi iindlela onokukhetha kuzo. Enye yazo kukutshintsha ikhowudi ye-SIM yeSIM, esele sikufundise kuyo kwesinye isifundo ngaphambili. Ngelixa elinye icandelo elikhoyo lelo lelo ibizwa ngokuba Tshixa iSIM khadi, okanye igama elinje, kuxhomekeke kwifowuni. Eli licandelo elinomdla kuthi, ke kuya kufuneka ucofe kulo. Sinethuba lokuvula okanye ukucima eli candelo nanini na xa sifuna. Ngokuyivula, senza ukuba akufuneki sisebenzise i-PIN khowudi kwifowuni.
Ngaba kulungile ukususa iPIN SIM?
Lukhetho olunezinto eziluncedo kunye nokungalunganga. Kwelinye icala, iyenza Kulula kakhulu ukuba umsebenzisi aqale ifowuni, xa uyicimile. Kuba kuyakufuneka ufake ikhowudi evulwe kuphela kwifowuni (iphasiwedi, isivamvo somnwe weminwe okanye ukuvula ubuso). Ke ukufikelela kwi-smartphone yakho kukhawuleza ngale ndlela. Abanye abantu, olu khetho lunokuba lunomdla.
Ngakolunye uhlangothi, ayisiyonto ilungileyo yokhuseleko lwefowuni. Yindlela eyongezelelweyo yokukhusela ifowuni, ngakumbi ukuba ibiyicimile kwaye umntu uyayilayita azame ukungena, i-PIN yindlela yokuthintela umntu ukuba angene. Ngokukodwa xa singenayo indlela eyongezelelweyo yokuvimba kwifowuni, senza kube lula ukuba umntu angene kwifowuni. Yinto ekufuneka ithathelwe ingqalelo.
Zithini kwaye ziziphi iingenelo ezibonelelwa yi-eSIM?
Kodwa ukuba unendlela eyongezelelweyo yokuvimba, Ke yinto enokuthi ithathelwe ingqalelo ukuba isetyenziswe kwi-android. Kuba i-PIN ikwanqanda umntu ukuba angene kwifowuni xa uyilayita.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Khu seleko » Ungayicima njani iPIN yeSIM khadi yakho kwi-Android
I-Redmi K20 sele inomhla wentetho
I-Lenovo Z6 yoHlelo loLutsha ifika kule Veki: Iifoto zokuqala kunye neenkcukacha ezisemthethweni